Kala duwanaanta iyo isu soo dhowaanshaha saadaasha hawada. Saadaasha Shabakadda
Kala fogaansho iyo isku duubni
Saadaasha hawada, waxaa jira dhowr fikradood oo aad muhiim u ah. Waxay ku saabsanyihiin isku soo dhowaanshaha iyo kala duwanaan. Haddii aan dooneyno inaan kordhinno tayada iyo saxnaanta saadaasha hawada, waa inaan ogaanno sida loo falanqeynayo dhacdooyinkan. Maanta waxaan ka shaqeyn doonnaa ogaanshaha qeexitaanka ifafaalahan iyo firfircoonida ay leedahay. Intaas waxaa sii dheer, waxaan arki doonaa sida ay u saameyso waqtiga iyo sida aan u aqoonsan karno.
Ma dooneysaa inaad wax badan ka ogaato kala-jebinta iyo isu-imaatinka? Waxaan kuu sharaxeynaa wax walba si faahfaahsan.
1 Waa maxay isku duubni iyo kala duwanaan
2 Hawlaha dhaqdhaqaaqa hawada
3 Kaladuwanaanta joogga
4 Khibrad u leh dabaysha
Waa maxay isku duubni iyo kala duwanaan
Markay jawiga ku jirto la dhaho isku soo duub ayaa jira, waxaan ula jeednaa burburin hawada aag gaar ah taas oo ka dhalatay barakaca. Burburkaani wuxuu keenaa hawo ballaaran oo ku urursan goob gaar ah. Dhanka kale, kala duwanaanshuhu waa cakis. Dhaqdhaqaaqa cufnaanta hawo awgood, way kala firidhsan tahay waxayna soo saartaa aagagga leh hawo aad u yar.
Sida la qiyaasi karo, ifafaalahan ayaa si weyn u saameynaya cadaadiska jawiga, maaddaama, halkaas oo isku soo duubid, ay jiri doonaan cadaadis hawo sare leh iyo kala duwanaansho mid hoose. Si loo fahmo hawlgalka ifafaalahan waa inaad sifiican u ogaataa dhaq dhaqaaqa hawada ee jawiga.
Aynu qiyaasno gobol aan dooneyno inaan ku falanqeyno hawada iyo durdurrada. Waxaan ku sawiri doonaa khadadka jihada dabaysha khariidad ku saleysan cadaadiska jawiga. Khad kasta oo cadaadis ah waxaa loo yaqaan 'isohipsas'. Taasi waa, khadadka cadaadiska hawo isku mid ah. Heerarka ugu sarreeya ee jawiga, ku dhow cunuggu, dabayshu waa geostrophic ficil ahaan. Tan macnaheedu waxa weeye inay tahay dabayl ku wareegeysa jihada u dhiganta khadadka dhererka juquraafi ahaaneed.
Haddii gobol daraasad lagu sameynayo aan aragno in khadadka qulqulka dabayshu ay is kulmayaan, waa sababta oo ah waxaa jira isku soo dhowaansho ama isku xirnaan. Dhanka kale, haddii xariiqyadan qulqulka ahi furmayaan oo kala fogaanayaan, waxaa la sheegay inay jiraan kala duwanaansho ama kala duwanaan.
Hawlaha dhaqdhaqaaqa hawada
Waxaan ka fakari doonnaa waddo weyn si aan u helno kuleylkaan badan Haddii wadada weyn ay leedahay 4 ama 5 haad oo si lama filaan ah ay u noqoto kaliya 2 haad, waxaan kordhin doonnaa taraafikada aagga oo leh wadooyin yar. Ka soo horjeedku wuxuu dhacaa marka ay jiraan laba haad oo si lama filaan ah ay u leexato wadooyin badan. Haatan, baabuurta waxay bilaabaan inay kala baxaan wayna fududaanaysaa in ciriiriga yaraado. Hagaag, isla waa loo sharixi karaa kaladuwanaanta iyo isku duubnaanta.
Mid ka mid ah xaaladaha ay suurtogalka ka tahay inay jirto kor u kac iyo hoos u dhac ku yimaada cufnaanta hawo ayaa la arkaa marka uu jiro xiriir dabayl wadata. Xawaaraha ay wataan dabeylaha kor u kacaya iyo kuwa soo degaya waxay u dhexeeyaan 5 ilaa 10 cm / s. Waxa ay tahay inaan ka fikirno ayaa ah, meelaha ay ku wada kulmayaan hawadu, waxaan ku yeelan doonnaa cadaadis ka sareeya jawiga, sidaa darteed, jiritaanka anticyclone. Aaggan waxaan ku raaxaysan doonnaa wakhti fiican oo waxaan ku raaxeysaneynaa heerkul deggan.
Taas bedelkeeda, aagga ay ku kala duwan yihiin hawada, waxaan ka heli doonnaa hoos u dhigidda cadaadiska cimilada. Meel hawo yar ayaa ku hartay. Hawada ayaa had iyo jeer u janjeerta dhanka aagga ay ku yar tahay culeyska ay ku buuxiso meelaha banaan. Sidaa darteed, dhaqdhaqaaqyadan hawadu waxay u horseedi karaan duufaan ama u dhiganta cimilada xun.
Saamaynta khilaafka ee ka dhex jira dhaqdhaqaaqa dabaysha hareeraha cadaadiska sare ama hooseeya, iyada oo la tixgelinayo in khilaafku laftiisu sababo ka weecashada jihada dabaysha, waa inay soo saarto kala-duwanaansho ama isu-imaatin. Si kale haddii loo dhigo, qaybta calaamadeysa xawaaraha si toos ah ugu xiran isobars-ka ayaa ah tan ka timaadda hawada soo geleysa bartamaha cadaadiska hoose ama laga saarayo banaanka marka ay jiraan cadaadisyo sarreeya.
Kaladuwanaanta, durdurrada hawadu waxay u kala baxaan laba socod oo bilaabaya inay u durkiyaan dhinacyo kala duwan. Nidaamka xukuma wareegga guud ee jawiga waxaa saameeya dhacdooyinkan. Markaan kala leexanno, dabaylaha waxaa loo beddelaa laba heer: joog sare iyo heer dhulka. Marista hawada ee hal meel ilaa meel kale waxaa loo qaadayaa si qumman. Dhaqdhaqaaqyada hawadan waxay keenaan sameynta waxa loo yaqaan unug. Haddii isku soo wada duubku ka hooseeyo, cufnaanta hawadu waxay bilaabaan inay sara u kacaan. Markay gaadhaan meel cayiman, waxay u kala baxaan laba socod oo u dhaqaaqi doona jiho kale.
Haddii qulqulka hawadani ay bilaabaan inay soo degaan, waxay gaarayaan aagga isu imaatinka, dhulka agtiisa, waxaan ka helaynaa aag kale oo cusub oo ku kala geddisan oo keenaya in qulqulka hawadu u wareegaan jihada ka soo horjeedda kii ay ku sameeyeen joogga. Tani waa sida wareegga ama unuggu u xiran yahay.
Kaladuwanaanta joogga sare waxay badanaa ka sameysmaan aagagga is-dhexgalka iyo gobollada cirifka. Meelahan, socodka hawada waxaa saameeya kuleylka deegaanka iyo cufnaantiisa. Dhammaan dhaqdhaqaaqyadani waxay abuuraan nidaam ka kooban 3 unugyo waaweyn oo juxtaposed ah kuwaas oo dhalinaya nidaam ay hawadu bilawdo inay u socoto si qumman.
Khibrad u leh dabaysha
Haddii waayo-aragnimadu waxtar noo leedahay, waa marka aan ku dhowaanno heerka badda badiyaa waxaa jira isku soo dhowaansho badan oo keena cusbooneysiin dhererkeedu yahay ilaa 8.000 mitir. Waa markaan joogno dhererkaas, cadaadis dhan 350 milibaar, marka kala duwanaansho calaamadeysan uu bilaabo inuu sameysto.
Hadaan aragno niyad jab ama duufaan oo waxaan ku jirnaa heerka badda, waxaa weeye isku xirnaanta dabaysha. Fooshaan cufnaanta hawadu waxay ku qasbeysaa inuu kor u kaco si qumman, intuu qaboobayo oo isu ururayo. Markay hawadu kacayso ay soo baxaan, waxay keenaan daruuro roob, gaar ahaan haddii kor u kaca miisaanka hawadu uu gebi ahaanba toosan yahay.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto wax badan oo ku saabsan fikradaha kala geddisnaanta iyo isu soo dhowaanshaha iyo muhiimadda ay u leedahay saadaasha hawada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Kala fogaansho iyo isku duubni
Juan Manuel Sanchez dijo
Marka ay ku kala-leexdaan dabeylaha dusha sare, cadaadiska jawiga ee bartaas ayaa ka sarreeya, tan iyo xilligaas waxaa jira hoos u dhacyo dabaylo ah, taas oo ah, dabayshu waxay u degaysaa si qumman. Markay dabeylahani gaaraan dusha sare, waxay aadaan raadinta xarumaha cadaadiska hooseeya, halkaasoo ay isku soo noqnoqoneyso dabeyluhu, waana cadaadiskaan hooseeya oo ay dabeyluhu kor u kici karaan
Si kastaba ha noqotee, markaad qoreyso sadarkan (xitaa cutubyada dambe):
“Sidaad u qiyaasi karto, ifafaalahan ayaa si weyn u saameynaya cadaadiska jawiga, maaddaama, halka uu isku-imaatinku ka jiro, uu jiri doono cadaadis hawo sare leh iyo mid ka hooseeya kala-duwanaanta. Si aad u fahamto sida ay ifafaalooyinkani u shaqeeyaan, waa inaad si fiican u ogaataa dhaqdhaqaaqa hawada ku jira jawiga.
waxaad qoreysaa habka ka soo horjeedka, adoo sheegaya in ay jiraan culeysyo sare oo jira marka ay isku soo noqdaan dabeyluhu, iyo cadaadisyo hoose oo u kala-baxa dabaysha.
Ilaa aad u jeeddo Isku-duwidda iyo Kala-baxa oo ku dhacaya korka dusha sare ee jawiga. Hadday sidaas tahay, waxaan u maleynayaa inaad taas caddeyso, maxaa yeelay waxay iska amaahanaysaa madmadow!
Sidoo kale, boostad aad u fiican!
Salaan ka timid Colombia!
Jawaab Juan Manuel Sánchez
Dayax gacmeed ayuu ku baxayaa